Baabuurta Been Abuurka ah ee Shiinaha ee Gawaarida Alloy Warshadaha iyo Warshadda | Hanvos
Daaweynta dusha Nadiifinta, Rinjiyeynta
Maxaan samayn karnaa? Mashiinka CNC
Tijaabooyinka shucaaca iyo foorarsiga
Maxaad noo dooranaysaa? Kooxda naqshadeynta xirfadeed waxay samayn karaan naqshadda ugu fiican
Waqtiga dhalmada degdegga ah.
Qiimaha warshadda & Tayo aad u fiican.
1.Specialize in wax soo saarka iyo iibinta rim wheel wheel alloy wheel for 20 sano.
2: Ku siiso tobanaan kun oo sawirro saamayn ku leh taayirrada baabuurka si ay suuq -geyn kuugu sameeyaan.
3: Markab leh qiimo jaban, boolal tayo sare leh, valves, siddo dhexe si wadajir ah si looga fogaado dhibka raadinta qalabka. Haddii qufulka dalabka uu weyn yahay, alaabtu waxay noqon kartaa lacag la'aan.
4.OEM waa la aqbalay, waxaa loo samayn karaa si waafaqsan shuruudaha faahfaahintaada.
5: Qiimuhu waa macquul marka loo eego tayada iyo tirada.
6: Gawaarida sameynta socodka waa badeecadayada ugu weyn, qiimo jaban, tayo sare leh iyo qaabab badan. culeys khafiif ah oo khafiif ah, 18inch waa 8.5kg oo keliya… tamarta badbaadinta.
7: Waqtiga wax -soo -saarka oo gaaban ee jumladaha.
8: Qalab horumarsan, habka waxsoosaarka oo aad u sarreeya, Nidaamka xakamaynta tayada oo adag iyo gudbinta shahaadada ISO.
Ku saabsan Lacag -bixinta & Maraakiibta
T/T 30% deebaaji iyo dheelitir ka dhan ah nuqulka B/L.
Xamuulka Hoose & Bixinta Degdegga ah
Waxaan doorannaa dhoofinta ugu wanaagsan ee la heli karo (oo ay soo dirtay DHL/UPS/FedEx/iwm. Hawada ama badda) Waxaan ku siin doonnaa faahfaahinta raadraaca markaan alaabta ka tagno.
Ningbo Hanvos Qiee Auto Parts Corporation waxay leedahay nidaam maareyn tayo oo kaamil ah iyo cilmi baaris wax soo saar oo xooggan iyo karti horumarineed. Shirkaddu hadda waxay leedahay in ka badan 300 nooc oo giraangirood ah, waxaa ka go'an horumarinta inay noqoto shirkad wax soo saar oo xirfad leh oo leh noocyada ugu badan ee rakaabka aluminium baabuurka rakaabka ee warshadaha ee Shiinaha. Gawaarideena waxaa loo dhoofiyaa Mareykanka, Kanada, Ruushka, Talyaaniga, Koonfur Afrika, Australia iyo dalal kale oo ka badan 10 waxaanan la leenahay xiriir iskaashi oo muddo dheer deggan boqolaal macaamiil ah.
Xiga: Miisaanka Culayska Aluminiumka, Laydhka Fudud, Aliminum Laydhka
Miisaanka Alxanka Aluminium, Laydhka Iftiinka, Iftiin ...